နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကျာပေါက် သမီး နဲ့ နီနီခင်ဇော် တို့ရဲ့ THE VOICE စင်မြင့်ပေါ်က အဖြစ်အပျက်လေး …. – GaMone Media
Homepage / Celebrity / နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကျာပေါက် သမီး နဲ့ နီနီခင်ဇော် တို့ရဲ့ THE VOICE စင်မြင့်ပေါ်က အဖြစ်အပျက်လေး ….
နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကျာပေါက် သမီး နဲ့ နီနီခင်ဇော် တို့ရဲ့ THE VOICE စင်မြင့်ပေါ်က အဖြစ်အပျက်လေး ….
Big Bag Band ရဲ့ ပင်တိုင်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဟန်ထူးလွင်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်ကျော်ကတည်းက Alternative သီချင်းတွေနဲ့ လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားသူပါ။ ဟန်ထူးလွင်က သူဝါသနာပါရာ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ဖို့ သူ့ရဲ့ သွားဆရာဝန်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို စွန့်လွှတ်ထားသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ပက်သတ်ပြီးလည်း မကြာသေးခင်ကမှ အိမ်ထောင်နဲ့ ကွာရှင်းထားတဲ့ ဟန်ထူးလွင်က သူ့ရဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်း အချိန်ပေးပြီး ဂရုစိုက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သမီးလေးတွေကို အရမ်းချစ်ပြီး လိုလေသေးမရှိပြည့်စုံအောင်ထားတဲ့ ဟန်ထူးလွင်က ဒီတစ်ခါမှာလည်း သူ့ရဲ့ အငယ်ဆုံးသမီးလေး ဆွိချိုရဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုကို ဖြည့်စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဟန်ထူးလွင်က သမီးငယ်ဆွိချို အကြိုက်ဆုံး အဆိုတော် နီနီခင်ဇော်ကို The Voice စင်မြင့်ပေါ်မှာ ဆုံတွေ့ခွင့်ရအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး သမီးငယ်အတွက် ဝမ်းသာပျော်ရွှင်သွားရအောင် သူတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျားပေါက်ရဲ့ သမီးငယ်လေး ဆွိချိုကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက နီနီခင်ဇော်ကို အရမ်းကြိုက်သူဖြစ်ပြီး ကျားပေါက်က နီနီခင်ဇော်ဆီ ဖုန်းဆက်ပေးရတာတို့၊ အပြင်မှာ တွေ့ခွင့်ရအောင်တို့ ရံဖန်ရံခါ ပြုလုပ်ပေးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွိချိုလေးလည်း မမနီနီခင်ဇော်နဲ့ တွေ့ရလို့ အရမ်းပျော်နေမှာ သေချာပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Previous post အတွင်းသား အလှကို ထင်လင်ပေါ် လွင်အောင် မိလွန်းနေ တဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြူသိင်္ဂကျော်
Next post ဓါတ်ပုံတွေ ရဲ့ နောက်ကွယ်က ပေးဆပ်မှုတွေ ကို ရင် ဖွင့် လာ တဲ့ ရွှေစင်